Iintengiso zeRetail kunye nezoThengi zabaThengi ngo-2021 | Martech Zone
Iintengiso zeRetail kunye nezoThengi zabathengi ngo-2021
NgoLwesithathu, Matshi 3, 2021 NgoLwesithathu, Matshi 3, 2021 Douglas Karr
Ukuba bekukho ishishini elinye esibonileyo ukuba litshintshe kakhulu kulo nyaka uphelileyo belithengisa. Amashishini angenawo umbono okanye izixhobo zokufumana ngokwamanani azifumene sele engamabhodlo ngenxa yokutshixeka kunye nobhubhane.
Ngokweengxelo zokuvalwa kwevenkile ethengisa ngaphezulu kwe-11,000 ngo-2020 ngeendawo ezingama-3,368 kuphela ezivulayo.
Thetha ishishini kunye nezopolitiko
Oko akutshintshanga ukuba kufuneke abathengi bathenge iimpahla (I-CPG), nangona. Abathengi baya kwi-Intanethi apho iimveliso bezithunyelwe kubo okanye bagcina iveni.
RangeMe liqonga elikwi-Intanethi elenza abathengi ukuba bafumane iimveliso ezivelayo ngelixa kuxhobisa abathengisi ukuba bakwazi ukulawula nokukhulisa iimveliso zabo. Bavelise le infographic ineenkcukacha kuthengiso oluphezulu kunye neendlela ze-CPG zowama-2021.
I-22021 iya kuba lixesha lokuba amashishini azenzele ubungqina bexesha elizayo njengoko siqhubeka nokuhambahamba kwiziphumo zobhubhane wehlabathi. Kubathengi, abathengisi, kunye nabathengisi, ukufunyanwa kwemveliso entsha kuya kuba ne-hyperfocus kwimpilo nakwintlalo-ntle kunye nokukhula kwamanyathelo okuzinzisa neyantlukwano. Kuya kubakho ugxininiso ekuthengeni izinto, ukufumana indawo, kunye nokuqonda amaxabiso.
Intengiso ephezulu kunye neeCG Trends zowama-2021
Iindlela eziPhezulu zoThengiso
Ukuthengwa kwexabiso I-44% yabathengi icwangcisa ukunciphisa ukuthenga okungabalulekanga njengoko amaqondo okungaqeshwa eqhubeka nokunyuka.
Thenga-ngoku-Bhatala-kamva -Kukho ukonyuka kwe-20% yoNyaka oNgaphezulu konyaka (i-YoY) yokuthenga-ngoku-ukuhlawula kamva-ukubalwa kwe-24 yezigidigidi kwintengiso.
Ukwahlukana - Kweli xesha litsha lokuqonda abathengi, eli shishini lisebenzela ukuzisa ukubandakanywa kunye nokwahluka ngaphambili kunye nokubeka phambili iimveliso ezinabanini abambalwa.
Sustainability -Ukuqonda okusingqongileyo abathengi bafuna iimveliso ukunciphisa inani lokupakisha abalisebenzisayo.
Ivenkile encinci, Ivenkile yaseKhaya - Iipesenti ezingama-46 zabathengi babekwazi ukuthenga kunye namashishini endawo okanye amancinci kule holide idlulileyo kuneeholide zangaphambili.
Ukuzonwabisa -53% yabathengi baceba ukuthenga ngeendlela ezibongela ixesha, nokuba ayiloxabiso lisezantsi.
eCommerce -Kukho ukwanda nge-44% kwintengiso ye-Intanethi, kathathu kwinqanaba lokukhula ngonyaka e-United States kwiminyaka edlulileyo!
Isitena esiGuquliweyo kunye noMdaka -I-44% yabathengisi abaphezulu abangama-500 abaneevenkile ezibonakalayo banikezela i-curbside pickup, i-ship-to-store, kunye Thenga kwi-Intanethi, Thatha ngaphakathi kwiVenkile (IBOPIS)
Iindlela zokuziphatha zabaThengi babaThengi
Ubunewunewu kunye neNkulumbuso yeNkulumbuso -Ukuthengisa ngexabiso eliphezulu ngo-2020 kuye kwanda nge-9% kunyaka ophelileyo njengoko abantu abasebenza emakhaya bejonge ukuphucula imeko-bume yabo kunye nokuzitotosa.
Ingqondo kunye nokutya komzimba -73% yabathengi bazinikele ekuxhaseni impilo-ntle yabo; I-31% yokuthenga izinto ezininzi ezenzelwe impilo yabo (kubandakanya ubunzima, impilo yengqondo, ukhuseleko, njl.
Health Gut -25% yabathengi behlabathi abahlupheka kwimicimbi yezempilo yokwetyisa. Abathengi bafikelela kwiimveliso ezixhasayo kwaye bayaziphepha iimveliso ezingazenzi.
Izambatho zibuyisa umva- Njengokubuyela kwindyikityha yokufa, ishishini lilindele ukukhula nge-30% kwintengiso yeengubo kulo nyaka.
Ukunyuka kwezityalo Kwakukho ukukhula kwe-YoY ngama-231% ngo-Matshi wentengiso ethengisa ukutya okusekwe kwizityalo eqhutywa yimpilo, iintlobo zokutya, kunye nokufumaneka kwemveliso.
Ukuhlekisa -Kukho ukunyuka kwama-42% kukhangelo lukaGoogle kwiziselo ezinxilisayo!
Iindlela zokuziphatha zabaThengi beHlabathi
Impilo yothintelo - I-50% yabathengi baseTshayina baceba ukuchitha ngaphezulu kunonophelo lwempilo lokuthintela, iivithamini kunye nezongezo, kunye nokutya okuphilayo.
Simahla-Imvelisos - Kwakukho ukukhula kwe-9% kwiimveliso ezinganyamezelekiyo kukutya. IVietnam, umzekelo, ezinye iindlela zobisi ezingenalo ubisi ezinjengeentlobo zobisi ezisekwe kumantongomane zikhula ngokuthandwa.
Vegan - Abathengi baseBritane abangama-400,000 bazamile ukutya kwevegan ngo-2020! Iinkampani ezingama-600 zase-UK zikhuthaze i-Veganuary kwaye zasungula iimveliso ze-vegan ezili-1,200.
Ukufezekiswa kwekhaya -60% yabathengi eSpain babona imveliso yokutya yaseSpain njengento ebalulekileyo ekuthengeni. Abathengi baseJamani baphembelela imeko yokuthenga yendawo ukuzinza kunye noxanduva kwezentlalo.
tags: nezambathobopisisitena nodakathenga intlawulo ye-Intanethi kwivenkileuphawu oluvaliweyoIindlela zokuthenga zabathengiiimpahla ezipakishwe ngumthengiukufunyanwa kwasekhayaukuthengisa ngaphandle kweintanethiIntengiso ye-omnichannelukuthengisa onlineimpilo yothinteloIxabiso-elibonayoukuthengisa okuthengisiweyoiindlela zentengisonokuzinzavegan
Qhuba ngakumbi ukuKhokela ngokuKwakha iphepha leLandingi loMakhi weWordPress
Uyiqala njani iPodcast yeShishini lakho (ngezifundo ozifunde kum!)